Izimonyo zendalo kwizinto zobomi bemihla ngemihla - iingcebiso zokusetyenziswa
Kufuneka ukwazi malunga nezonyango zemvelo
Imveliso yokunyamekela imele ihlambuluke kakhulu isikhumba kwaye yenze ibe yinto enhle. Uninzi lwemveliso lunobungozi kwimpilo. Zininzi izithako ze-creams zidibene nezifo. Ngenxa yoko, ufanele ukhethe izicumba zendalo kunye nokuphepha ukusebenzisa iikhemikhali rhoqo ngangokunokwenzeka.
Ngokuqinisekileyo kunye nezimonyo zendalo
Iigelisi zokugcoba, ezenziwe kwizonyango zendalo, ziyafumaneka kwiindidi ezahlukahlukeneyo, kunye ne-vanilla yemango, igromegranate, i-orange orange kunye nangaphezulu. I-gel evamile yokuhlambela i-oyile isebenzisa ioli yamaminerali. Kwizimonyo zendalo uzakufumana ioli yekakhukhunathi. Ngokukodwa kwesikhumba esomileyo okanye esicacileyo, kulungelekile njengoko kungabi nciphisa kakhulu isikhumba.
Yenza iingcebiso ngezonyango zemvelo
I-self-tanner ye-Organic nayo ixhomekeke kakuhle yesikhumba esibucayi, njengoko banobubele ngakumbi kwesikhumba. Kodwa-ke akukho nto i-self-tanner, kuba zonke izikhumba ziphendula ngokungafaniyo. Abazhenyi be-Organic banezithako ezingenasiphelo kunye nezingozi. Kufuneka uhlukanise umququzeleli womzimba kunye nomzimba. Ubuso buvelele ngakumbi elangeni kunomzimba.
Isikrini sesibhakabhaka njengezonyango zendalo ziqukethe kuphela i-suneral screen. Ezi zibonisa ilanga njengesibuko. Ngokukodwa enesikhumba esinomdla kakhulu kufuneka usebenzise i-sun cosmetic sun creams. Ihlala elukhumbeni kwaye ngoko kungenza ukhuseleko olwaneleyo.
iimveliso Hair wesimeli
I-gel yeenwele kunye neenwele zifakela kwimvelo - umgangatho awukho nje kuphela kwimeko yendalo, kodwa nakwabantu abane-scalp. Iipilisi zeenwele ze-Organic aziququzekisi, izikhuni zensimbi, iziqhumiso ze-altificial kunye ne-silicones kwaye zisanike iinwele kakuhle kunye nokukhanya okukhulu.
Okwangoku, kukho yonke imibala yeenwele kwiimpawu zendalo. Imibala yemvelo iguqa ngeenwele njengeengubo. Izityalo zemvelo zinika iinwele zizele kwaye zikhanyise. Umbala wezinwele zityalo awunazo izigulana, akukho mibala yokufakelwa kwaye akukho zongezo zokufakelwa. Idayi zentlanzi zityalo zange zonakalise isakhiwo seenwele zakho.
Ioli yegeranium ifanele iphumelele kwaye inamandla njenge-vitamin A. Ngokukodwa iibhaktheriya zivelisa umswakama binder hyaluronic acid. Oku kwenza ulusu lubonakale luncinci kwaye lube lukhulu nakuninzi.
Ubuninzi, i-Kajal, i-Eyeshadow & Co
Kukho ukhetho olubanzi lwemveliso ye-organic yokwenza. Ndiyabulela ukuhambelana kwazo kakuhle, zisetyenziswe ngokukhethekileyo kwiintlobo zesikhumba. Ngokuqhelekileyo banezithako ezinomdla obondla kunye noxolo. Akumele uyenze ngaphandle kwebala kunye nefuthe xa ukhangela izimonyo zendalo. Iziqhumiso ezongezelelweyo zikhutshwa kwisiseko sezinto eziphilayo.
Nge-mascara yemvelo ufumana i-eyelashes ende kunye nebala. Iqulethe izithako ezifana neoli yekamela. Le yileli ephosa ngokukhawuleza ebeka ngokukhawuleza emoyeni, ayiyi kudibana kwaye ayiyi kuqubuka.
Ukongeza kwimiyalelo yokunyamekela engenambala, kukho ukubomvu okukhohlisayo kwizonyango zemvelo. Izithambo zomlomo zingenayo i-oil mineral, i-conservatives okanye i-flavour artificial. Ziqukethe amafutha anesondlo ezinomsoco, ukucoca izicucu zeentyatyambo kunye neengxube ze-organic. Ngoko akukhathazeki ukuba ufumana enye ye-lipstick emlonyeni wakho.
Iimpawu zendalo zimele zisetyenziswe ngokukhethekileyo kwesikhumba esibuhlungu, kodwa nangona ubeka ingqalelo ekunyamekelweni kwemvelo kunye nemeko.
Iimpawu zendalo ziyindlela entsha. Yenzelwe ukondla isikhumba sakho kwaye unciphise iingxaki zesikhumba. Izithako zikhishwe kwizinto zendalo.
Kwiimveliso ezininzi izinto ezifana 'nendalo', "yendalo" okanye "i-organic". Nangona kunjalo, kukho amaxesha amaninzi akukho zinto zendalo kule miveliso. Funda ngokuchanekileyo oko kukupakishwa. Ngoko unokwazi njani ukuba ngaba iminqweno yendalo? Uncedo lunika iziqinisekiso zomgangatho wezonyango zemvelo. Izibonakaliso onokuzithemba ngazo, umzekelo, ileta ye-NAT, uphawu lwe-ECOCERT kunye nophawu lwe-BDHI Controlled Natural Cosmetics. Amanqaku anolu xinganiso ngumzekelo isaziso, sante, dr. Hauschka okanye Lavera.
Uthini umahluko phakathi kwezilwanyana zendalo kunye nezimonyo ze-organic?
Ngokuqhelekileyo, izimonyo zemvelo ziphosakele ziphosakele ngenxa yezityalo zezityalo. Iimpawu zendalo zivele ziquka iimveliso ezinomxholo ophantsi wezithako ze-biological. Kwiimveliso zezilwanyana zendalo kunye nezongezelelo zamakhemikhali ziyavunyelwa ukuba kungenakudingeka. Ngakolunye uhlangothi, i-cosmetic cosmetics, iqulethwe kumgangatho ophezulu, izinto ezibonakalayo zendalo; azikho iikhemikhali okanye izixhobo ezincedisayo.
Kutheni i-cosmetics yemvelo?
Iimpawu zendalo zimele zihluthe kwaye zikhanyise isikhumba sakho. Ikhululekile kwiingozi kunye ne-hormones-changing variants. Iimpawu zendalo azenzeli nciphise yonke into eqhathaniswa neziqhumiso eziqhelekileyo zesikhumba, zibavuselela ukuziphatha kakuhle. Abaqulunqi bezitifiketi zendalo bayangqina kwaye bakhuthaze ukuzimisela kwiimeko ezifanelekileyo zokusebenza kunye nokukhuselwa kwendalo. Ukongezelela, ukuhlolwa kwezilwanyana kuphelelwe ngumbuzo kwizonyango zendalo. Kwizimonyo zendalo, iziqholo zendalo kunye neetayi kuphela. Iqhumiso elenziwe ngokukhawuleza linokukhawuleza ukucaphukisa iiswini ezibuhlungu. Ukusebenzisa ukwakheka okuqhelekileyo, kubonakale ngathi ulusu phantsi kweempawu alukwazi ukuphefumula ngokufanelekileyo. I-Cosmetics kunye nezithako zendalo, nangona kunjalo, yenza ukuba kukhangeleke kube lula kwaye kuhlaziye.
Yintoni eguquka kwizonyango zendalo?
Iimpawu zendalo zisebenzise amandla angokwemvelo kwesikhumba, ngoko ke kunokunika ukutshabalalisa kokuqala. Ubuthakathaka bunokunyuka, kuze kube yilapho isikhumba sitshintshile kwi-self-regulation. Ngokomzekelo, ngokungafani neendabuko zobusuku bendabuko, akukho mafutha okanye amafutha asetshenziswe ebusuku, kodwa i-serum enamandla. Kwikhumba elomileyo, le nto ingaqhelekanga ngexeshana. Kodwa isikhumba asiveki sinzima kwaye sinokubuyiselwa kakuhle ebusuku. Kufuneka unike ixesha lesikhumba, kubalulekile ukuhlala kunye nomceli weemveliso. Isikhumba sidla ngokuthatha malunga neenyanga ukulungisa.
Kukho izinto ezininzi ezintle kwizonyango zemvelo. Ulusu lwakho luya kulusebenzisa kwaye lukhanye ngokubonakala kakuhle.